Alipay to Open App to More Services to Take on Meituan | Myanmar Business Today
Home Business Regional Alipay to Open App to More Services to Take on Meituan
But Alipay said on March 10 it plans to start allowing third-party vendors that offer services like retail, food and healthcare on its platform, moving intoarealm that analysts say will pit it more firmly against on-demand service giant Meituan Dianping’s “super-app”.
Meituan, which is currently China’s third most valuable internet company by market capitalization, offers services varying from on-demand food delivery to movie ticketing to hotel and travel booking on its platform.
Alipay said it had during the coronavirus outbreak in China introduced an incentive scheme to entice developers to create mini-programs for some vendors, resulting in 181 mini-programs being created during the week.
Ant has also been pushing ahead with expansion plans outside its home turf of China to offset tepid growth. It has in recent months applied foraSingapore digital banking license and invested in similar businesses in Southeast Asia and Europe.
တရုတ် အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီး Alibaba နှင့် မိတ်ဖက်လုပ်ငန်းဖြစ်သော Ant Financial သည် ယင်း၏ Alipay မိုဘိုင်းငွေပေးချေရေး ပလက်ဖောင်းတွင် အစားအသောက် ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ဟိုတယ်အခန်းမှာခြင်းကဲ့သို့သော် ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန်အတွက် ပြင်ပလုပ်ငန်းများကို စတင်ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Alipay သည် ပုံမှန်အားဖြင့် မိုဘိုင်းငွေပေး‌ချေရေး၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မျုများအတွက် တရုတ်နိုင်ငံတွင် Tencent Holding၏ WeChat နှင့် ယှဥ်ပြိုင်နေရသည်။
သို့သော် မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင်တော့ ၎င်း၏ ပလက်ဖောင်းတွင် လက်လီရောင်းချခြင်း၊ အစားအသောက်နှင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုများကဲ့သို့သော ဝန်ဆောင်မျုများ‌ပေးရန်အတွက် ပြင်ပလုပ်ငန်းများကို စတင်ခွင့်ပြုထားရန် ပြင်ဆင်ထားကြောင်း Alipay က ကြေညာခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်လိုက်ခြင်းကြောင့် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် Meituan Dianping၏ “super-app”ကဲ့သို့သော အချိန်နှင့် တပြေးညီဝန်ဆောင်မှုပေးရသော ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ယှဥ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
Alipay က ၎င်းအနေဖြင့် Alipay တွင် ‘mini-pgragrm’ များ ပြုလုပ်လျက် ပြင်ပ လုပ်ငန်းပေါင်း သန်း ၄၀ အား သုံးနှစ်အတွင်း ယင်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ပြောင်းလဲရန် ကူညီပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။ ထိုကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းငယ်များအနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ သန်း ၉၀၀ သော ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုသူများနှင့် ထိတွေ့ခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။
SOURCEYingzhi Yang and Brenda Goh (Reuters)
Previous articleIn Malaysia’s Silicon Valley, Fortunes Flip as Virus Wrecks Trade War Gains
Next articleIndonesia Announces Tax Relief for Manufacturing During Virus Outbreak